Daawo: Dowladda Somalia oo sheegtay in Garoonka Aadan Cadde uu Habeenkii si rasmi ah u shaqayn doono - Hablaha Media Network
Daawo: Dowladda Somalia oo sheegtay in Garoonka Aadan Cadde uu Habeenkii si rasmi ah u shaqayn doono
HMN:- Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in si rasmi ah u shaqeynayo xilliga habeenkii garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kaddib markii dhowaan lagu xiray nalalka ifiya dhabbaha ay diyaaradaha ku ordaan.
Wasiirka Gaadiidka Cirka iyo dhulka Xukuumadda Soomaaliya Maxamed C/llaahi Salaad Oomaar ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha Muqdisho uu wixii hada ka dambeeya shaqeyn doono 6-da subaxnimo illaa 10-ka habeenimo.
“Waxaa rabnaa inaan idinla socodsiino in garoonka uu shaqo bilaabay habeenkii, kaddib markii aan sameynay nalal ifiya dhabaha ay diyaaraddda ku orodo”ayuu yiri Wasiirka Gaadiidka Cirka iyo Dhulka.
Sidoo kale Wasiirka ayaa ku wargeliyay shirkadaha Isgaarsiinta in Anteenooyinkooda ku yaala degmooyinka Wadajir, Waabari, Hodan, Xamar weyne, Xamar Jajab iyo Wardhiigle inay ku xiraan nalalka calaamadaha, si diyaaradaha u ogaadaana meelaha ay anteenooyinka ay suran yihiin xilliga habeenkii.
Garoonka diyaaradaha Caalamiga ee Aadan Cadde ayaa wixii ka dambeeyay bur burkii dowladdii dhexe shaqeyn xilliyada habeenkii, waxaana garoonka uu shaqeynayay gelinka hore illaa gelinka dambe ee maalintii.